आजको राशिफलवि.सं. २०७५ साल असोज २२ गते। सोमबार। – AstroSimara.Com
By Astro Sudeep Dhakal	 On Oct 7, 2018
इश्वी सन् २०१८ अक्टोबर ८ तारिख। शकसंवत् १९४०। विरोधकृत् संवत्सर। दक्षिणायन। शरद ऋतु। नेपाल संवत् ११३८ ञलगा। आश्विन कृष्णपक्ष। तिथि– चतुर्दशी, १०:५० बजेउप्रान्त औंसी। नक्षत्र– उत्तरफाल्गुनी, १४:०० बजेउप्रान्त हस्त। योग– ब्रह्म, १८:५४ बजेउप्रान्त ऐन्द्र। करण– शकुनि, १०:५० बजेदेखि चतुष्पद, २१:५९ बजेउप्रान्त नाग। आनन्दादिमा श्रीवत्स योग। चन्द्रराशि– कन्या। काठमाडौंमा सूर्योदय– ६:०० बजे, सूर्यास्त– १७:४१ बजे र दिनमान २९ घडी ११ पला। दर्श-श्राद्ध। औंसी श्राद्ध। पितृ विसर्जन, सोह्रश्राद्ध समाप्ति। निशि बार्ने औंसी। श्रीप्राणनाथ जन्मोत्सव।
भौतिक लाभ र विशेष गरेर मानसिक सुदृढताको लागि मनन र योग सुरु गर्नुहोस्। तपाईं अरूको लागि बढी खर्च गर्न चाहनु हुनेछ। नयाँ निवेश गर्नु पर्दा स्वतन्त्र भएर आफ्नो निर्णय आफैं लिनुहोस्। रोमान्सका लागि राम्रो दिन। आज तपाईंले आफ्नो मनको जाँच गर्नु हुनेछ – तपाईंहरू कसैले चेस-क्रोसवर्ड खेल्न लाग्नुहुनेछ भने कसैले कथा-कविता लेख्नु हुनेछ वा भविष्यको बारेमा केही योजना बनाउनुहुनेछ। तपाईं आफ्नो कामुक वैवाहिक जीवनमा एउटा सुन्दर परिवर्तन अनुभव गर्न जानु हुँदैछ।
जीवन रमाइलो पार्न आफ्नो आकांक्षाहरूको जाँच गर्नुहोस्। योगको मदत लिनुहोस् – जसले तपाईंलाई आफ्नो स्वभाव सुधार गर्न शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक तवरमा स्वस्थ भएर बाँच्ने कला सिकाउँछ। दिनको पछिल्लो भागमा वित्तीय सुधार हुनेछ। बच्चाहरुले तपाईंलाई घरेलू काम पूरा गर्न मद्दत गर्नेछन्। तपाईंको प्रियतमा आज आफ्नी जीवित दूत बन्नेछिन; यस क्षणको कदर गर्नहोस्। तपाईंको इच्छा अनुसार सबै कुराहरू अगाडि बढीरहेको समयमा एउटा जोडको हाँसोले दिनभरी खुशी ल्याउँछ। आज आफ्नो जोडीले तपाईंलाई दुनियामा उसको अर्को कोही छैन भन्ने महसुस गराउनेछ।
तपाईंले केही उँचो पदका व्यक्तिहरू भेट्दा त्रसित नहुनुहोस् र आफ्नो भरोसा नगुमाउनुहोस्। यो व्यापारको लागि पूँजीजस्तै राम्रो स्वास्थ्यको लागि आवश्यक छ। विशेष गरेर प्रमुख वित्तीय सम्झौतामा बातचीत गर्दा, हतारमा निर्णय नलिनुहोस्। घर वा सामाजिक भेलामा भएको मरम्मतको काममा तपाईं व्यस्त हुने सम्भावना छ। आज तपाईं मुटु फुट्नबाट बच्नुहुनेछ। तपाईंले आफ्नो सम्पत्तिमा लापरवाह गर्नुभयो भने हानि वा चोरी हुन सक्छ। कसैले वैवाहिक जीवन झगडा र यौन हो भनेर सोच्ने गर्छन्, तर आज सबै निर्मल हुनेछ।
धेरै क्यालोरी भएको आहारबाट जोगिनुहोस् र आफ्नो व्यायाम तिर ध्यान दिनुहोस्। दीर्घ अवधिको आधारमा तपाईंले लगानी गर्नुभयो भने पर्याप्त लाभ हुनेछ। तपाईंले भरोसा गरेको कसैले तपाईंलाई पूर्ण सत्य नभनेको हुन सक्छ – तपाईंको अरूलाई विश्वस्त गर्ने क्षमताले आउने समस्याहरूको समाधान गर्न मद्दत गर्नेछ। तपाईंको प्रेमीले बहिस्कार गरिनाले तपाईंको अनमोल उपहार / इनामले पनि खुशीयाली ल्याउन सक्दैन। तपाईं परिस्थितिबाट भाग्नु भयो भने – त्यसले तपाईंलाई साह्रै नराम्रो तरिकाले पछ्याई रहनेछ। आफ्नो जोडीको व्यवहारले आज तपाईंको व्यावसायिक सम्बन्धमा बाधा पर्न सक्छ।
तपाईंले अवकाशको खुशीलाई रमाइलो पार्न जानु हुँदैछ। अचानक धनको लाभ हुनाले तपाईंको बिल र तत्काल खर्च पूरा गर्नेछ। यदि सञ्चार र छलफलहरू राम्रो तरीकाले भएनन् भने – तपाईंले रीस उठेर पछि पछुताउनु पर्ने कुरा बोल्न सक्नुहुन्छ – केही बोल्नु अघि राम्ररी सोच्नुहोस्। आज रोमाञ्चक दिन हुनेछ किनकि तपाईंले आफ्नो प्रियबाट उपहार / इनाम प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईंले आजको दिनलाई उत्तम बनाउन आफ्ना लुकेका गुणहरू प्रयोग गर्नुहुनेछ। आफ्नो जोडीले आज तपाईंलाई खुसी बनाउने प्रयास गर्नेछन्।
आफैलाई सुहाउँदो र राम्रो राख्न बढी क्यालोरी भएको आहारबाट जोगिनुहोस्। लामो समयदेखि रोकिएको अवशिष्ट र बकाया अन्तमा बरामद गरिनेछ। आमाबाबु र मित्रले तपाईंलाई खुसी राख्न आफुले सकेसम्म गर्नेछन्। प्रेममा निराशा हुन सक्छ तर मन नमार्नुहोस् किनभने प्रेमीहरू जहिल्यै चापलूस हुन्छ्न। कुनै पनि समस्यालाई हटाउनको लागि इच्छा भएमा केही पनि असम्भव हुँदैन। विवाह भनेको एकै छानो मुनि बस्नु मात्र होइन। आफ्नो साथीसँग केहि समय बिताउनु धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
स्वास्थ्य पूर्णत ठीक रहनेछ। तपाईंको निवेश र भविष्यको लक्ष्यबारे गोप्य हुनुहोस्। बच्चाहरुले आफ्नो उपलब्धिले तपाईंलाई गर्व महसुस गराउनेछन्। तपाईं विपरीत लिंगीहरूको लोकप्रिय र सजिलै आकर्षित सदस्य हुनुहुनेछ। कर र बीमाको विषयमा केही ध्यान दिनु आवश्यक हुनेछ। आफ्नो ठाउँमा भएको कुनै बच्चा वा कुनै पनि बुजुर्ग नागरिकको नराम्रो स्वास्थ्यले तपाईंलाई चिन्तित बनाउन सक्छ जसले तपाईंको वैवाहिक जीवनमा सीधा असर पार्नेछ।
तपाईंलाई केही मानसिक आघातको सामना गर्नु परेमा धेरै साहस र शक्तिको प्रदर्शन गर्नु आवश्यक छ। तपाईंले आफ्नो आशावादी मनोवृत्तिले सजिलै यिनीहरूलाई हटाउन सक्नुहुनेछ। बुद्धिमानी तरीकाले निवेश गर्नाले मात्र लाभ हुनेछ – त्यसैले तपाईंले दुखले कमाएका पैसा राम्रो ठाउँमा निवेश गर्नु हुँदैछ भन्ने निश्चित गर्नुहोस्। तपाईंको कार्डमा धार्मिक स्थल वा आफन्तको घरमा भ्रमण गर्ने सम्भावना देखिन्छ। कार्डमा कसैले प्रस्ताव गर्ने सम्भावना छ। यात्रा गर्ने मौका खोज्नु पर्नेछ। आज तपाईंले आफ्नो जोडीका प्रेमको चरम देख्नु हुनेछ।
हृदयरोगीहरूलाई कफी छोड्ने सही समय हो। कुनै पनि बढी प्रयोगले तपाईँको हृदयमा अनावश्यक दबाब पार्नेछ। तपाईंले आफ्नो अतिरिक्त पैसा आउने समयमा लाभ हुने सुरक्षित स्थानमा राख्नुहोस्। तपाईंले चाहनुभएको सबै ध्यान प्राप्त गर्नुहुने आज राम्रो दिन छ – तपाईंले धेरै कुराहरू लहरै पाउनुहुनेछ र तपाईंलाई के चाहिं लिनु हो भन्ने निर्णय लिन समस्या पर्नेछ। तपाईंले कुनै वनभोज स्थलमा गएर आफ्नो प्रेमी जीवनलाई रोशन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंलाई आफ्नो जीवनमा रोचक कुरा होस भनेर लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिरहनु भएको छ भने – तपाईंले केही राहत पाउने पक्का छ। तपाईंले सामाजिक मिडियामा वैवाहिक जीवनका ठट्यौलीहरू पाइ राख्नु हुन्छ, तर आज तपाईं आफ्नो वैवाहिक जीवन बारेमा अचम्म लाग्ने सुन्दर तथ्य आफ्नो अगाडि आउँदा साँच्चै भावुक हुनु हुनेछ।
अनावश्यक रूपमा आफैलाई कोस्नाले जाँगर मार्दछ। विशेष गरेर प्रमुख वित्तीय सम्झौतामा बातचीत गर्दा, हतारमा निर्णय नलिनुहोस्। तपाईंको जोडीले आनन्द दिने प्रयास गर्नाले आज आनन्द भरिएको दिन हुनेछ। रोमान्टिक अमूर्तताले तपाईंको आनन्दमा मसला थप्नेछ। तपाईंले आजको दिनलाई उत्तम बनाउन आफ्ना लुकेका गुणहरू प्रयोग गर्नुहुनेछ। आफ्नो जोडीले तपाईंलाई केही नराम्रा कुराहरूका साथै तपाईंको किशोर समयको याद दिलाउने छन्।
तपाईंले परिस्थितिलाई जित्नु भयो भने पीर हराउनेछ। तपाईंले यसलाई साहसको पहिलो स्पर्शमा फुट्ने साबुनको फोकाजस्तो हो भनेर बुझ्ने सम्भावना छ। लामो अवधिको लाभको लागि स्टक र आपसी धन लगानीमा सिफारिस गरिन्छ। तपाईं यसको लागि बाहिर जानु पर्ने भए तापनि – छोराछोरीसँग आनन्द मनाउन आफ्नो खाली समय खर्च गर्नुपर्छ। तपाईं आज आफ्नो साथीको धुकधुकीसँग समन्वयन हुनुहुनेछ। हो, यो तपाईं प्रेममा हुनुहुन्छ भन्ने चिन्ह हो! आफ्नो जीवनमा पछि गएर पछुताउनु पर्ने कुरामा हतार निर्णय नगर्नुहोस्। वैवाहिक जीवनले धेरै लाभबरू संगै लिएर आउँछ, र तपाईंले आज ती सबैको अनुभव गर्नु हुनेछ।
आज तपाईं ऊर्जावान हुनु हुनेछ, तपाईंले जे गर्नुहुन्छ, त्यो तपाईंले साधारण रूपमा गर्ने भन्दा आधी समयमा गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। पैसाको समस्या दिनको पछिल्लो भागमा सुधार हुनेछ। तपाईं र तपाईंको सम्पूर्ण परिवारमा जयजयकार गराउने महत्त्वपूर्ण व्यक्तिगत विकास हुनेछ। तपाईंको प्रेमीले आज उपहारका साथ केही समयको आशा गर्न सक्छन्। आज तपाईंले चाहेका कुराहरू नहुने दिन हो। आज तपाईंले आफ्नो जीवनसाथी के अर्थमा लिनुभएको छ भन्ने महसुस गर्नु हुनेछ।